Hawlgal ka soconaaya Isgoysyada Magaalada Muqdisho qaarkood, ka dib weerarkii Shaqaalaha UNHCR – STAR FM SOMALIA
Hawlgal ka soconaaya Isgoysyada Magaalada Muqdisho qaarkood, ka dib weerarkii Shaqaalaha UNHCR
Hawlgal ballaaran, ayaa caawa ka soconaaya qaar ka mid ah Isgoysyada Magaalada Muqdisho, oo lagu baadi-goobaayo dabley hubeysan oo maanta weerar ka gaysatay xaafadda Siigaale, oo ka tirsan Degmada Hodan Ee Gobolka Banaadir.
Dabley hubeysan, ayaa weerartay gaari ay la socotay gabar ka tirsan Hay’adda UNHCR iyo darawalkeedii, waxayna dileen gabadhaasi iyo wadihii gaarigeeda, iyadoona ay dilka ka dib ka baxsadeen xaafadaasi.
Ciidan fara-badan, ayaa waxaa caawa lagu arkayaa Isgoysyada Taleex, Dabka, Shaqaalaha, Sayidka, Ceelgaabta Xamar Weyne iyo wadooyin kale, waxaana la raadinayaa gaarigii dilka lagu gaystay iyo raggii gaystayba.
Taliyaha Ciidanka Booliska Degmada Hodan, ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in ay dadaal ugu jiraan, sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayen dembiilayaasha iyo gaarigii ay la socdeenba.
Taliyaha, ayaa cadeeyay in Isgoysyada Magaalada Muqdisho ay qaarkood dhigeen ciidan fara-badan, oo baaritaano adag ku marsiinaaya buu yiri gaadiidka adeegsanaaya Isgoysyadaasi.
Dadka socota, ayaa arkaayay iyadoo xitaa baaritaano lagu samaynaayo mooto bajaajka iyo gaadiidka gaarka loo leeyahay, waana qayb ka mid ah dadaalada lagu baadi-goobaayo dembiilayaasha.
Gabadha la dilay, ayaa waxaa magaceeda lagu sheegay Amina Maxamed Nuur, halka darawalkana lagu magacaabi jiray Daahir. Sida uu sheegay Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir, C/fataax Cumar Xalane.
Diyaaradda Turkish Airlines oo ka baaqatay duulimaadkii ay ku taggi laheyd Magaalada Muqdisho
Wararka2 mins ago
Wararka10 mins ago